Andrimpanjakan’ny Tetezamita : nitaky ny zony sy tombontsoany ireo mpikamban’ny CT | NewsMada
Andrimpanjakan’ny Tetezamita : nitaky ny zony sy tombontsoany ireo mpikamban’ny CT
Tsy afaka ny hangina intsony. Nivoaka amin’ny fanginany ary naneho hevitra momba azy ireo ny mpikambana eo anivon’ny kongresin’ny Tetezamita (CT), omaly. Nambaran’izy ireo fa tsy mbola nandray ireo zo sy tombontsoany samihafa izy ireo.
« Efa voasoratra anaty lalàna izany zo sy tombontsoanay izany ka angatahinay amin’ny tompon’andraikitra amin’izao fotoana izao na ireo ho avy eo ny hanomezana anay izany », hoy ny mpitarika azy ireo, sady filohan’ny CT, Rakotoarivelo Mamy, omaly tetsy Antaninarenina. Nambaran’izy ireo fa tsy tokony hotsinontsinoavina izany rehefa tsy lasa ho senatera na depiote izy ireo. « Tsy sanatria fitadiavan-tseza na fanabotriana firenena izany. Nahavita ny adidinay ihany izahay fony CT satria anisan’ny nampijoro izao fanjakana izao tamin’ny fandaniana ireo lalàna samihafa teny Tsimbazaza », hoy ihany izy.
Hampitambatra ny heriny ny CT
Nohitsiny fa miray hina tanteraka izy ireo ary hanangana ny fikambanana mihitsy amin’ny herinandro ho avy io. « Tsy misy resaka politika na resaka antoko : Tim na TGV na inona na inona eto fa ny CT rehetra ireo… », hoy ny filohan’ny CT.
Notanisainy fa tokony hahazo ny mari-boninahitra sy ireo tombontsoa samihafa amin’ny maha andrimpanjakana azy ny eo anivon’ny CT.
Anisan’ny tsy mbola nahazo izany rahateo ny filohan’ity andrimpanjakan’ny Tetezamita ity, noho izy lehiben’ny CT tamin’izany. « Miantso ireo mpikamban’ny CT rehetra izahay, hiara-kisalahy ho amin’ny fampandrosoana ny firenena, miainga amin’ny fananganana io fikambanana io. Hiantsoana ireo tsara sitrapo rehetra koa izany… », hoy izy.
Hisy hihaino izy ireo, manoloana izao fisafotofoton’ny raharaham-pirenena izao ?